Pnpkhabar.com | Nepali Online News, Videos & Entertainment अभिनेत्री क्याट्रिना कैफलाई पट्याउन के गर्नुपर्छ ? उनि आफैले गरे यस्तो खुलासा - Pnpkhabar.com
अभिनेत्री क्याट्रिना कैफलाई पट्याउन के गर्नुपर्छ ? उनि आफैले गरे यस्तो खुलासा
एजेन्सी : अभिनेत्री क्याट्रिना कैफ बलिउडकी एक सुन्दर र कुशल अभिनेत्रीहरुको टप लिष्टमै पर्ने गर्दछन् । फिल्म उद्योगमा उनको यात्रासँगै सफलताको ग्राफ पनि माथि चडेको छ । यता अभिनेत्री क्याट्रिनाको फ्यान फलोइङ पनि तीब्र रुपमा बढीरहेका छन् । क्याट्रिनाको प्रत्येक डान्सले चार्टबस्टरमा धुम मच्चाएकै हुन्छ ।